Cunto: Sidee loo xakameeyaa Website kasta oo ku jira Google Chrome iyada oo aan la sii dheereynin
Galitaanka website (s) wuxuu noqon karaa lagama maarmaan inta badan isticmaalaha kombiyuutarada. Tusaale ahaan, dadka qaar ayaa go'aan ka gaari kara inay xannibaan carruurta si ay u helaan boggag kala duwan. Xaalado kale, waxaa laga yaabaa inaad rabto in biraawsarkaagu uu sii joogo bilaash inuu ka helo goobaha qaarkood sabab gaar ah - cheapest vps 2gb. Xaaladahaan, adigoo isticmaalaya istaraatiijiyad aad ku ilaalin karto shabakadaada kumbuyuutarka kumbuyuutarka adigoo isticmaalaya boggaan waxay noqon kartaa xalka.
Igor Gamanenko, khabiir takhasus leh oo ka socda Semt , wuxuu diiradda saari doonaa tusaalahan shabakada Chrome, tusaale ahaan farsamooyinkan ayaa sidoo kale ka shaqeyn kara daalacayaasha kale ka dib qaabab kala duwan.
Qaar badan oo ka mid ah daaweynta loo heli karo dhibaatadani waxay ku lug leedahay barnaamijyada iyo kordhinta. Xaaladaha qaarkood, barnaamijyada iyo fidinta browserka waxay qaadataa RAM saameynta saameynta kombiyuutarka. Xaaladaha kale, kordhinta iyo barnaamijyadu waxay ku dili karaan weerarrada foosha xun iyo sidoo kale marin dheeraad ah oo aan loo fasaxin taasoo keenta in la waayo macluumaadka shakhsi ahaaneed. Qoraalkan SEO wuxuu ka kooban yahay hababka ugu fiican oo sharxaya sida loo xakameeyo websaydhka iyada oo aan codsaneynin barnaamijyada ama kordhinta:
1. Ka hortagga shabakadaha internetka ee ka yimid Aqoonsiga Aqoonsiga
Galitaanka shabakadda internetka laga soo qaado faylka martida waa suurtagal. Qofka isticmaalaya kumbuyuutarka kumbuyuutarka, waxaad ka hortagi kartaa boggaga internetka ee adeegsiga habka hoos ku qoran:
Riix badhanka bilowga
Meelaha raadinta ee soo baxaya, qor "C: \_ Windows \_ system32 \_ drivers" iwm oo aad gasho.
Riix guji oo fur feylka 'fedhere' iyadoo la isticmaalayo qoraaji
Nooca '127.0.0..1 'xagga hoose ee dukumeentiga, ka dibna booska iyo URL ee bogga aad rabto in aad xannibanto
Ha ku qorin calaamadaha qorraxda ee ku yaal kitaabkan
Waa lagama maarmaan in aan lagu darin "http:" ama "www" sidii aad rabto inaad u joojiso iyada oo aan loo eegin qandaraaska.
Diiwaangelinta dukumeentiga oo dib u cusbooneysii kumbiyuutarkaaga
Habkani waa inuu ku guuleystaa inuu xannibo boggaga internetka ee laga soo galo Chrome. Trick-ka waxa laga yaabaa inuu la kulmo arimo la xidhiidha nidaamka hawlgalka. Si kastaba ha ahaatee, waxay ka shaqeysaa Windows 7.
2. Ku xakameynta shabakadaha internetka ee Chromeka gacanta
Qaar ka mid ah dadka isticmaala waxay heli karaan habka kor ku xusan farsamooyinka yaryar si ay u shaqaaleeyaan kombiyuutarkooda. Xaaladdan, waxay isticmaali kartaa shabakada internetka ee Chrome si loo xakameeyo isticmaalka shabakadda. Tusaale ahaan, mid ayaa abuuri kara kormeeraha kormeeraha kumbuyuutarka si loo isticmaalo shaashadaha bogagga. Si aad u abuurto kormeer kormeer, waxaad raaci kartaa nidaamkan:
Furan Chrome oo aad u socotid meelo.
Ku qor cinwaanka 'dadka', riix 'Add person'
Ku dar qofkaga meesha "Xakameyn oo fiiri bogagga internetka ee qofkan booqanaya"
Halkan waxaad ka xakameyn kartaa bogagga internetka adiga oo adeegsanaya kumbuyuutarka isticmaalaha kormeera.
Websaytka waxaa laga xakameyn karaa 'ruqsadaha' ee 'qaybta shabakadaha internetka'
Intii aad isticmaaleysey internetka, waxaa laga yaabaa inay soo baxaan baahiyo aad u xaddidan helitaanka shabakadda internetka oo ka socda browserka. Xaaladahaan, dadku waxay isticmaalaan habab kala duwan si ay u xaddidaan helitaanka goobahaas ka soo daalacayaashooda. Farsamooyinka caadiga ah ee lagu xakamaynayo bogga gelitaanka waxaa laga yaabaa inay ku lug yeeshaan fidinta fiditaanka shabakada si ay hawshaan u gutaan. Dadka kale waxay isticmaalaan barnaamijyada kombiyuutarka kuwaas oo ka caawinaya daalacayaashu inay xadidaan booqashada bogagga internetka. Xalashooyinkani waxay leeyihiin caqabad ku ah ammaanka internetka iyo waxqabadka kombuyuutarka. Tilmaamahan SEO wuxuu leeyahay habraacyo ku saabsan sida loo xakameeyo shabakadaha isticmaalaya habab kala duwan. Waxaad ku baran kartaa farsamooyinka buug-gacmeedka ama xannibaya helitaanka goobta ka socota Faylka Aqbaarta.